गोविन्द प्रसाद दाहाल चिया सहकारीका अभियन्ताका रुपमा परिचित नाम हो । सहकारीका माध्यमबाट चियाको विकास र अर्गानिक उत्पादन प्रवद्र्धनमा उनको योगदान अतुलनीय छ । सरकारले चिया क्षेत्रको विकासका लागि जति ध्यान दिनुपर्ने हो त्यो नदिएको दाहालको गुनासो छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र यथा भारतसमेतमा चिया निर्यात सहज ढंगले हुननसक्नुमा सरकारको कमजोर कुटनीति मुख्य कारक रहेको उनको भनाइ छ । चिया क्षेत्रका समस्या,नयाँ श्रम ऐनले तोकेको पारिश्रमिक र चिया सहकारी संस्थाका विषयमा केन्द्रित भएर अमरवाणीका अतिथि सम्पादक यादव थपलियाले दाहालसँग गरेको कुराकानीः
केन्द्रीय चिया सहकारी संघको वर्तमान गतिविधि कस्तो छ त ?
केन्द्रीय चिया सहकारी संघले अहिले प्रारम्भिक सहकारीहरूलाई उद्यमशीलतातर्फ अग्रसर गराइरहेको छ । यस अभियान अन्तर्गत ३० ओटा प्रारम्भिक चिया सहकारीलाई सहकारी उद्योग स्थापना गर्न लगाएर व्यवसायिक बनाउन सहयोग गरेका छौं । यस अभियान अन्तर्गत केही सहकारीलाई डेनमार्क सरकारको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित उन्नति परियोजनाले सहयोग गरेको छ भने केहीले आफ्नै पूँजी लगानी गरेर उद्योग स्थापना गरेका छन् ।
यस्ता चिया उद्यो कहाँ–कहाँ स्थापना भएका छन् ?
ती उद्योगहरू चिया उत्पादन भइरहेका क्षेत्र झापा, इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, ललितपुर र रामेछाप जिल्लाका चिया सहकारीहरूले सञ्चालन गरेका छन् । यसबाट चिया सहकारीहरू दिगो र आत्मनिर्भर बन्दै जानेछन भन्ने संघको अपेक्षा रहेको छ ।
यस्ता उद्योग स्थापना गर्न कति लगानी आवश्य हुन्छ ?
अहिले चिया सहकारी संघले साना र मझौला किसिमका उद्योगहरू स्थापना गरिरहेको छ । साना उद्योगहरूमा करिब एक करोड रुपैयाँ लगानी भएको अवस्था छ भने मझौला उद्योगमा दश करोडसम्मको लगानी भएको छ ।
चिया उद्योग स्थानपनाका लागि सहकारीहरूले ऋण पनि लिएका छन् कि ?
ऋण लिएका छन् । कतिले बैँकको ऋण लिएका छन भने कतिले सरसापटी गरेर उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन् । अहिले नेपालको पूर्वका सात ओटा जिल्ला इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, ताप्लेजुङ र संखुवासभामा उन्नति परियोजनाले उद्योग स्थापना गर्न ५०% अनुदान दिएकोले गर्दा पनि चियाका सहकारीहरूलाई उद्योग स्थापना गर्न सजिलो भएको छ ।
नयाँ श्रम ऐनले तोकेको चिया श्रमिकको पारिश्रमिकबाट चिया उद्योगीहरू असन्तुष्ट देखिन्छन् । यसको असर चिया सहकारीमा कस्तो पर्ला ?
अहिले जुन ऐन आएको छ, त्यसको विपरीत जाने कुरा त्यति राम्रो हुँदैन । ऐन ल्याउनु अघि सोचेर ल्याउनु पथ्र्याे । अब मजदुरहरूले जुन पैसा पाउनुपर्ने कुरा छ, नेपाली मजदुरलाई नेपाल भित्रै राख्ने वातावरण होस् भनेर ल्याईएको ऐन हो । नेपालमै रोजगारी पाएर उनीहरूले जीविकोपार्जन गर्न सकुन भनेर यो श्रम ऐन ल्याईएको हो । अहिले तोकेको चिया श्रमिकको तलब १० हजार ७ सय ८१ रुपैयाँ र सेवासुविधा जोड्दा महजदुरले १५ हजार पाउनुपर्ने देखिन्छ । यसको साथसाथै अतिरिक्त समय पनि काम गर्ने हुँदा त्यो रकम पनि भुक्तानी गर्नुपर्ने हुँदा चिया उद्योगलाई असर पारेको छ । चिया उद्योग अलिक मौलिक उद्योग हो । चिया बगानमा काम गर्ने मजदुरलाई सहकारीले आप्mनो कारखाना र बगानमा छुट्टा–छुट्टै काममा लगाउँदा समान ज्याला दिनुपर्छ । किनभने आसपासका बगान र कारखानामा प्रचलित सुविधा अनुसार पारिश्रमिक दिनै पर्ने हुन्छ ।
नियम बमोजिम बढेको तलब श्रमिकहरूको अधिकार हुन्छ । तर, चिया उद्योगले भने नयाँ तोकिएको पारिश्रमिक दिनसक्ने अवस्था कमै छ । किनभने फाईन पत्ती टिप्दा एउटा मजदूरले करिब पाँच किलो टिप्छ । अर्गानिक पत्तीको भाऊ ७२ देखि रू.७५ सम्म छ, यसमा न्यूनतम रू. ४० प्रचलित छ । सिटीसिको हरियो पत्ती पनि टिपेको ज्याला ७÷८ रुपैयाँ छ । नयाँ ऐन बमोजिमको पारिश्रमिक दिँदा उद्यमीलाई नाफा हुने सम्भावना ज्यादै न्यून छ । यदि सरकारले चिया बगान र उद्योगलाई अनुदान दिने हो भने नयाँ ऐन बमोजिम जान सकिन्छ ।
सरकारबाट कस्तो अनुदानको अपेक्षा गर्नुभएको हो ?
सरकारले चिया मजदुरको तलब रू. ९ हजारबाट बढाएर सुविधासमेत गरेर करीब १५ हजार पुर्याएको अबस्था छ,हामी यो तलबमान उद्योगले धान्न सक्दैन भनिरहेका छौ । यसैले चिया श्रमिकलाई बढेको तलब सुविधा दिने भने सरकारले बढेको तलब र सुविधा अनुदान दिनुप¥यो । होईन भने, तलब बढाएर छोडेर अलपत्र पार्ने काम गर्नुभएन । किनभने, यो पहिला हलिया उन्मूलन ग¥यो । अनि एउटा ठाउँ दिएर राख्यो । हो त्यसरी नै चियामा पनि अनुदान दिनुपर्छ । मजदुरलाई बढेको तलब दिनुपर्छ । त्यो उनीहरूले पाएको अधिकार हो । तर, उद्योगले दिनसक्छ कि सक्दैन, यो कुरा सरकारले विचार गर्नुप¥यो । मजदुरले कति घण्टा काम गरेको छ, उसले आप्mनो ज्याला नै नउठ्ने गरी काम गरेको छ भने कसरी ज्याला दिने भन्ने कुराहरू छन् । दैनिक ५ किलो पत्ती टिपेर कति रुपियाँ दिनु ? ७० रुपैँया किलो पहाडको विक्छ अनि ८ रुपैँया किलो मधेशको विक्छ । उसलाई ज्याला कसरी दिने ? यो कुरा सोचिनुप¥यो । उसले गरेको कामले उसको ज्याला पुग्छ कि पुग्दैन ? मालिकले दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरो सोचिनुप¥यो । दुईटैको समझदारीबाट ज्याला निर्धारण गरिनु पर्छ ।
चिया निर्यातमा विभिन्न खालका बाधा देखिएका छन्,कुरा के हो ?
यसबारे हामीले पटक पटक सरकारसँग कुरा राखेका छौं । खासगरी भारत निर्यातमा निकै नै बाधा उत्पन्न भएकाले यो विषय परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् जानुपर्छ भनेर कृषि मन्त्रालयको पनि व्यापार प्रवद्र्धन शाखामा कुरा राखेका छौँ । चिया निर्यात गर्दा सरकारले सहजीकरण गरिदिनु पर्यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो । तर, त्यसो हुन सकेको छैन । भारत जाने अर्गानिक चिया यहाँ प्रमाणित भईसकेपछि फेरि सर्टिफिकेट ‘अफ फुड एण्ड लेबोरेटरी’ भनेर कोलकातामा जाँच गराईराख्नुपर्ने अवस्था म देख्दिन् । नेपालमा जाँच भईसकेपछि भारतमा किन फेरि जाँच्ने ? काँकडभित्तामा चियाको ट्रक राखेर कोलकतामा चिया पुर्याएर जाचेर ल्याउँदा २१ दिनसम्म ट्रक होल्ड हुन्छ । यसरी २१ दिनसम्म ट्रक होल्ड हुँदा नेपाली चिया व्यवसायीले ठूलै आर्थिक क्षति व्यहोर्नु पर्छ । यसको क्षतिपूर्ति कस्ले दिने ? यसअघि चियामा भारतले ‘लक्जरियस ट्याक्स’का नाममा कर लगाएको थियो ।
यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ नेपाली चिया भारतीय बजारमा नजाओस् र भारतीय उत्पादनले सधैँभरी भारतीय बजारमा कब्जा जमाईरहोस् भन्ने भारतीय व्यापारीहरूको चाहना हो । तर, नेपालको चिया भारतको भन्दा गुणस्तरीय र राम्रो भएकाले भारतीय व्यापारीले रोक्न चाहेर पनि रोक्न नसकेको अवस्था छ । नेपालको हरियो चियापत्ती भारत लैजादा चाहिँ उसलाई कुनै चेक जाँच गर्नु नपर्ने तर नेपालबाट तयारी जादा भने अनेकथरी लफडा लगाएर रोक्न खोज्ने भारतको नियतमै खोट छ । नेपालको हरियो चियापत्ती भारतीय व्यवसायीहरूले निर्वाध रुपमा लगेर आफ्नो ब्रान्ड बनाएर बेच्छन् । नेपालको चिया भारतको भन्दा गुणस्तरीय भएकाले नै उनीहरूले यस्तो गरेका हुन् । यहाँ सम्म कि भारतले आप्mनो चिया बचाउनका लागि नेपाली चियालाई समेत आफ्नो उत्पादन बनाएर जोग्राफिकल ईन्डोग्राफी गरेर आप्mनै क्लोनहरूको नामाकरण समेत गरिसकेको छ । अब नेपाली चिया चिया हामीले भारत वा तेस्रो मुलुकमा बेच्यौँ भने पनि यसको रोयल्टीको ७५% भारतले नै प्राप्त गर्छ । यो अत्यन्त दुखद पक्ष हो । राज्यले यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी ठानेको छैन् ।
नेपाली चियालाई भारतले आफ्नो क्लोन बनाउन पाउँछ र ?
नेपालको चिया उसले मेरो हो भनेर दर्ता गर्ने चरणमा छ । उसले दर्ता गर्ने अवस्था भएको हुँदा अब नेपाल सरकारले हाम्रो क्लोन र सिडहरू तत्काल डब्ल्युटिओमा दर्ता गरेनौँ भने भविष्यमा नेपालको चिया अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जाने लक्षण छैन । चिया विकास बोर्ड के हेरेर बसिरहेको छ त ? चिया विकास बोर्ड राजनीतिक थलो बनेको छ । जुन पार्टीको नेता कृषिमन्त्री बन्यो, बोर्डमा उसकै मान्छे नियुक्त हुन्छन । चियाको अवस्था के छ ? के गर्दैछ भन्ने कुरा बोर्डको विषय भएकोले यो भन्दा वढी बोर्डलाई नै सोध्नुपर्छ । तर, राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरूबाट आश गर्नु बेकार छ ।
बोर्डमा चिया विज्ञ छैनन् ?
केही कर्मचारी चिया विषय पढेका पनि छन् । तर, बोर्डमा चिया विज्ञका रुपमा प्रवेश पाएको देखिदैन । आजसम्म केन्द्रीय चिया सहकारी संघलाई चिया बोर्डमा प्रवेश दिईएको छैन । प्रतिनिधित्व गराईनुपर्छ भनेर कृषि मन्त्रालयलाई, चिया बोर्डलाई पटक पटक सम्बन्धित निकायमा हरेक साल ध्यानाकर्षण गराईन्छ । अब प्रतिनिधित्व गराईन्छ चाहिँ भनिन्छ तर अहिलेसम्म सहभागी गराउने काम भएको छैन ।
अहिले चिया सहकारीहरू कति छन् ?
चिया सहकारीको सङख्या १ सय १० पुगेको छ । यसमध्ये १ सय ६ ओटा केन्द्रीय संघमा आबद्ध छन् । ५ जिल्ला झापा, ईलाम, पाँचथर, तेह्रथुम र ललितपुरमा जिल्ला संघ गठन भईसकेको छ । भोजपुरमा पनि जिल्ला संघ बन्ने तयारी छ ।
चिया सहरकारी संघको महासंघ बन्ने तयारी छैन ?
ऐन कानुनले यसलाई चिया संघ भने पनि यो महासंघ नै हो । हामीले नेपालभरी कार्यक्षेत्र बनाएर किसानको तहमा, प्रोसेसिङको तहमा, उत्पादनको तहमा, बजारको तहमा काम गरिराखेको अवस्था छ । यस अर्थमा हामी महासंघ नै हौं ।
संघले श्रमिकलाई के कस्ता सेवा सुविधा दिँदै आइरहेको थियो ?
मेरो मिसन भनेको किसान अब किसान नै भएर हैन उद्योगी, व्यापारी भएर अगाडि जानुपर्छ भन्ने हो । त्यसैले मजदुरहरूलाई पनि शेयर दिएर, उद्योगमा सहभागी गराएर मालिक बनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो अभियान हो । मजदुरलाई दिने सबै सुविधा दिएका छौँ । नेपाल सरकारको भन्दा डेढा सुविधा दिएर राखेका छौँ ।
कुन–कुन क्षेत्रमा कसरी सुविधा पाउँछन् ?
फ्याक्ट्रीमा काम गरे भने उनीहरूले मेसिनको काम गर्छन् । उनीहरूले प्रोसेसिङ, प्याकेजिङको काम गर्छन् । बगानमा गएर चिया टिप्ने काम गर्छन् । तर पनि बगानतिरको सहकारीको आप्mनो भएको कारण त्यसको एउटा छुट्टै तरीका छ । अर्मपर्मको सिष्टम हुन्छ । चलनचल्तीको ज्यालामा काम गर्ने हुन्छन् । चलन चल्तीको जे छ, त्यहि दिईन्छ । जस्तो अहिले चलनचल्तीमा रू. ५०० छ भने कसैले जान्ने भएर रू.७०० सय दिँदा त्यसलाई बहिष्कार गर्ने सामाजिक परिपाटीको विकास हुन्छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुँदैन । समान रुपले ज्याला उपलब्ध गराईन्छ । महिला पुरुषमा पनि ज्यालाको विभेद छैन ।
अर्गानिक चिया उत्पादको अभियान कत्तिको सफल भएको छ ?
अर्गानिक चिया अभियान सफलतापूर्वक अगाडि बढिरहेको अवस्था छ । शुरूमा सहकारीहरू आफैँ र फ्याक्ट्रीहरूसँग मिलेर अर्गानिक प्रमाणिकरण गरेका थियौं भने अहिले केही सहकारीहरूले आफैँले गरिराखेका छन् ।
कुन कुन सहकारीले गरेको छ ?
ग्रीनहिल चिया उत्पादक सहकारी संस्था, उच्च पहाडी चिया उत्पादक सहकारी संस्था, तीनजुरे चिया उत्पादक सहकारी संस्था आफैँले गरेको छ । सहरकारी र समूहहरू जसको आप्mनो फ्याक्ट्री छैन, उनीहरूले नजिकको कारखानासँग समन्वय गरेर आप्mनो बगान प्रमाणिकरण गरेका छन् । जस्तो पाँचथरमा कञ्चनजंघा टि–स्टेटबाट त्यहाँका सहकारी र किसानहरूले प्रमाणिकरण गरेका छन् । यता, ईलामतिर गोर्खा टि–स्टेटसँग स्थानीय चिया सहकारीहरूले समन्वय गरेका छन् । अहिले विषादीको कुराहरू न्यूनीकरण भएको छ । यो स्वास्थ्यलाई हानिकारक हो भन्ने कुरा बुझेका छन् । अब चियामा विषादीको प्रयोग नै हुँदैन् । पहाडी क्षेत्र करिब–करिब विषादी र रासायनिक मल मुक्त क्षेत्र बनिसकेको छ ।
यो त अर्थाेडक्स चियाको कुरा भयो ? सिटिसी चियाको अवस्था के छ ?
सिटिसीमा पनि अर्गानिक बन्ने क्रम जारी छ । सिटिसी सहकारीको क्षेत्रमा पाराखोपी र हल्दिबारीले विषादीरहित चिया उत्पादन गरेका छन् ।
चिया क्षेत्रका मुख्य समस्या के–के हुन् ?
चिया क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनका लागि पहिलो कुरा त सरकार सकारात्मक बन्नु पर्यो । अन्य उद्योगहरू शहरकेन्द्रित हुन्छन् तर चिया ग्रामीण क्षेत्रको उद्योग हो । नेपालको मौलिक उत्पादन भनेको चियामात्रै हो । सिमेन्ट उत्पादन गर्न कच्चा पदार्थ विदेशबाट ल्याउनुपर्छ । साबुन, चाउचाउ बनाउन पनि कच्चा पदार्थ विदेशबाटै ल्याउनुपर्छ । चियाको सम्पूर्ण कच्चा पदार्थ नेपालमै उत्पादन हुन्छ । र, उत्पादनको ९०% निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा कमाउने एक मात्रै उद्योग चिया उद्योग हो । प्रदेश नं १ मा कृषि क्षेत्रमा १७% योगदान चियाको छ, चिया उच्च मूल्य भएको कमोडिटी हो । यो निर्यातयोग्य भएकोले अत्यन्त राम्रो कृषि व्यवसायको रुपमा अगाडि बढेको छ । त्यसैले पनि सरकारले नै यसलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्यो । नेपाली चियालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लैजान के गर्नुपर्छ ?
पहिलो कुरो, अर्गानिक जोन विकास गर्नुपर्छ । विरुवा रोप्दाखेरि टि–जोनहरू बनाउनुप¥यो । कारखाना खोलेपछि विद्युत लिन निकै झन्झटिलो छ । एउटा सहकारीले सामान्यतया एउटा ट्रान्समिटर राख्न र तारहरू जडान गर्न न्यूनतम दश लाख रुपैँया खर्च गर्नु पर्छ । त्यति गर्दा पनि त्यो ट्रान्समिटर सहकारीको सम्पत्ति नबन्ने रहेछ । त्यो चाहिँ सार्वजनिक सम्पत्ति ठहरिँदो रहेछ । त्यस्ता ट्रान्समिटर र विद्युत लाईनको व्यवस्था नेपाल सरकारले गरिदिनुपर्छ । ग्रामीण सडकहरूको विकास गरिदिनुप¥यो । गुणस्तरीय चिया बनाउनको लागि किसानलाई झोलाहरू दिनुप¥यो । नेटिङको व्यवस्था गरिदिनुप¥यो । चियालाई अर्गानिक बनाउनको लागि जुन खर्च पर्छ त्यो शतप्रतिशत नेपाल सरकारले बेहोरिदिनुपर्छ । केन्द्रिय चिया महासंघमार्फत् यस्ता कार्यक्रम अघि बढाउनुप¥यो । सकिँदैन भने कुन कुन ठाउँमा सकिन्छ एउटा माष्टर प्लान बनाएर त्यसरी लानसक्नुपर्छ । नत्र भन्छु र गर्छु भनेर मात्रै हुँदैन ।
चिया सम्बन्धी शिक्षा नेपाल सरकारले लागु गर्नुप¥यो । हामीले मेची क्याम्पसमा पढाई सुरु गरेका थियौँ । विद्यार्थीहरूले चार वर्ष पढे । थेसिस लेख्दा एक वर्ष गरेर पाँच वर्ष पढे । लगानी पनि भयो तर सरकारले मान्यता दिएन । पढाईलाई नेपाल सरकारले आफैँले रोक्यो । नीति निर्माण तहमा चिया बुझेको मान्छे नभएको कारण चियाको विषयलाई महत्व दिईएन । मास्टर्स लेभलमा पनि चिया पढ्ने व्यवस्था मिलाईदिनुपथ्र्याे । ब्याचलरमा पढेको चिया विषय बिएस्सीएजी सरह मान्य हुनुपथ्र्याे । त्यो हुन नसक्दा विद्यार्थीले त्यो विषय पढ्न गरेको खर्च व्यर्थ भयो । अहिले उनीहरूलाई केन्द्रिय चिया संघ र चिया बोर्डले चिया अधिकृत भनेर नियुक्ति दिएको छ । सरकारले उनिहरुलाई चिया विज्ञ भनेर लिन सक्नुपथ्र्याे, तर त्यसो भएन । यो खेदको बिषय हो ।
प्रकाशित ९ भाद्र २0७५ , शनिबार | 2018-08-25 06:12:32